Henoch रोग: pathogenesis, लक्षण, पत्ता लगाउने
Hemorrhagic vasculitis (Henoch-Schonlein purpura रोग) प्राप्त diatheses पोत पर्खाल को permeability मा लाभप्रद वृद्धि कारण पर्छ। त्यहाँ आफ्नो प्रकटीकरण धेरै प्रकारका छन्। नाम "Henoch-Schönlein" विदेश जान। शब्द "gemorrragichesky vasculitis" मात्र 1959 देखि घरेलू चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ।
Henoch रोग: pathogenesis
यो सानो रक्त नली र capillaries को एक एलर्जी सुनिंनु मा आधारित छ। फलस्वरूप, यो प्लाज्मा exuded र रातो रक्त वरपरको ऊतक मा अवस्थित छ। Histopathological घाउ तस्वीर लगभग मा जस्तै हो periarteritis nodosa। तर hemorrhagic vasculitis मा क्षतिग्रस्त छन् ती जहाजहरू पनि सानो।
Henoch रोग: लक्षण
यो मुख्य रूप जवानहरूले असर गर्छ। प्रमुख लक्षण - Exudative-hemorrhagic वर्ण संग खुट्टा मा एक दाना। को nodules विभिन्न आकार हुन सक्छ, तर सामान्यतया सानो symmetrically disposed। को दाना अक्सर संयुक्त दुखाइ, खुजली, फ्रेंच र सारा रूपमा तापमान मा एक वृद्धि सँगसँगै छ। रोग धेरै गाह्रो छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले ठूलो hemorrhagic स्थलहरू मा फैलाउन र मर्ज। तपाईं व्यापक क्षेत्रको मरन देखि आक्रान्त अनुभव हुन सक्छ। पछि 10-15 दिन दाना सामान्यतया हराउँछ, तर सधैंभरि। यसलाई प्राय देखा पर्छ। किनभने periarticular edema को, जोडहरुको मा परिवर्तन। कहिलेकाहीं Henoch रोग थप गर्ने Tissues र आन्तरिक अङ्गहरू मा रक्तस्राव द्वारा जटिल छ। यो पेट र intestines को पाठ्यक्रम मा हुन्छ भने, पेट ठिक दुखाइ भइरहेको। मस्तिष्क रक्तस्राव पक्षाघात र paresis विकास सँगसँगै छ। कहिलेकाहीं परिवर्तन देखा मात्र आन्तरिक अङ्गहरू, र रेटिना को रक्त नली र आँखा र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली असर, hemorrhagic vasculitis लागि विशिष्ट हो।
Henoch रोग: आकार
rheumatoid, बिजुली-छिटो, सजिलो, र पेट purpura: तिनीहरूले चार छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको विशिष्ट लक्षण छ। सरल purpura, उदाहरणको लागि, सँगसँगै hemorrhagic rashes छाला र श्लेम लाग्एको झिल्ली मा। सामान्य फ्रेंच मा देखिन्छ, तापमान rises। rheumatoid purpura परिवर्तनहरू मा जोइन्टहरूमा (सामान्यतया गोडा) मा आउँदैन। तिनीहरूले धेरै पीडादायी बन्न, सुनिनु। अपेक्षाकृत युवा मान्छे र बच्चाहरु मा साधारण पेट purpura हुन्छ। जब यो आंतों र पेट रक्तस्राव उत्पन्न। गंभीर पेट दुखाइ आक्रमण हो। को उल्टी रगतको अवलोकन admixture, tarry मल। यी सबै घटना शरीर तापमान मा एक वृद्धि सँगसँगै छन्। त्यहाँ नै समय र विशेषता दाना मा। कम अक्सर तिनीहरूले लिनुअघि पेट सिंड्रोम वा पछि आउँदैन। Fulminant purpura नै लक्षण छ, तर साधारण पहिलो दिन देखि मृत्यु परिणाम हुन सक्छ भनेर गाह्रो छ।
Henoch रोग: पहिचान
यो hemophilia बाट अलग महत्त्वपूर्ण छ thrombocytopenic purpura। पहिचान विशिष्ट र चिरपरिचित Exudative hemorrhagic दाना, सामान्य मा संयुक्त दुखाइ र रोगबाट उपस्थिति आधारित छ। को विश्लेषण को परिणाम विचार खातामा platelets संख्या लिनुपर्छ - तिनीहरूले सामान्य हो, कुनै परिवर्तन रगत coagulation, एक रगत थक्का को सङ्कुचन को संकेतक हुन आवश्यक छ।
एक बच्चाको मुखमा Sores
Papillary थाइरोइड कार्सिनोमा: कारण, लक्षण, चरणमा र उपचार को peculiarities
बोधो जब Pinky के?
एक बच्चा सेता क्यालोरी किन छ?
रक्तचाप मीटर चयन गर्न जो एक?
के गोप्य बेल नाम लुकाउँछ? नाम को मूल्य र जीवन यसको प्रभाव
ओपेरा "Rigoletto": एक सारांश। Dzhuzeppe Verdi गरेको ओपेरा "Rigoletto"
Nikolas Rodzhers - एक लोकप्रिय अष्ट्रेलियन अभिनेता, फैशन व्यापार को तारा
को अभिजात वर्ग को आत्मा: पत्थर नक्काशी।
तापमान कफी: वर्णन, इतिहास, विभिन्न
कौशल - automaticity विकास छ
औद्योगिक नियन्त्रक: उत्पादकहरु, यन्त्र, सञ्चालन सिद्धान्त, प्रयोग
बुना टोपी सुई। बालिका सबैभन्दा मूल मोडेल लागि
प्रोसेसर Mediatek MT8382: प्रविष्टि-स्तर ट्याब्लेट लागि सही समाधान
लाभ र staining को विशेषताहरु: लामो कपाल Ombre
ब्लग के हो र तपाईं यसलाई किन आवश्यक